Khudaar Dheeftu ku yar tahay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Khudaar Dheeftu ku yar tahay
La daabacay måndag 18 januari 2016 kl 16.30
Khudrad aan fiitamiin laheyn
Khudaar kala duwan. sawirqaade: Anna Björndahl/Sveriges Radio.
Khudaarta cusub ee maanta dukaamadeena yaala ma aha kuwa la mid ah kuwii hore ee aan isticmaali jirney.Khudaartaan cusub ayaa waxaa ku yar maadooyinka dadka ka difaaca cuduradda halista ah,sida ay muujinayso baaritaan ay sameeysey waaxda wararka ee idaacadda Iswiidhan.
Khudaarta ayaa waxay xanbaarsan yihiin fiitamiino iyo macdano muhiim nolosheena u ah sidoo kalena waxaa ku jira khudaartaas maadooyin kale
Sida macdanta lagu magacaabo Fyto oo markaan cuno jirka u sameeya difaac, taas oo naga caawineysa caafimaad qabkeena guud.
Tusaale ahaan khudaarta caadiga ah sida tamaandhada oo kale ayaa waxaa ku jira macdan lagu magacaabo Lykopen oo qeyb ka ah macdanta Fyto taas oo markaan tamaandho badan cuno naga difaaceysa qeyba ka mid ah cudurka Kansarka sidaas daraadeed waa in qofku doortaa tamaandhada ku haboon.
Baaritaan ay sameysey waaxda wararka ee idaacadda Iswiidhan ayaa muujineysa in xarumaha cusub ee khudaarta lagu gadaa ay iibshaan khudaar ay ku yar tahay maadada muhiimka ah ee fyto marka la barbardhigo khudaartii ay horey u gadi jireen.
Arrintaan ayaa waxaa sabab u ah iyadoo dadka khudaarta ka ganacsadaa ay muhimadda saareen khudaar si deg deg ah ugu baxda mira badana u dhasha.Habka noocaan ah ayey khudaartu, waxay ku lumineysaa wax badan oo ka mid macdanta muhiimka ah oo ay xanbaarsan tahay sida macdanta loo yaqaan fyto.
Irene Mattisson waa khabiir baratey dheefta cuntooyinka laga helo waxayna ka hawlgashaa hay’adda cuntada Iswiidhan:
- waxyaalaha la beerayo aad looguma fiirsado dheefta ay xanbaarsan yihiin ee waxaa badanaa la eegaa oo kaliya macaashka laga helayo iyo sidii loo daabuli lahaa.
Sharon Mac Gregor waa mid ka mid ah madaxda suuq geynta mid ka mid ah goobaha ugu waaweyn ee khudaarta lagu gado ee shirkadda Monsato ,waxayna xaqiijisey in badanaa uu jiro khilaaf u dhexeeya macaash badan oo ganacsigaas laga rabo iyo sidii loo heli lahaa khudaar nafaqo leh
- Haddii abuurku nafaqo badan yahay waxaa laga yaabaa in dhanka kale uu macaashkiisu yar yahay taas oo ay adag tahay in la maareeyo.
Laakiin taas macneheedu soo ma aha in dadku aysan dukaamada ka helin khudaartii nafaqada laheyd ee ay jeclaan lahaayeen in ay gataa, ayaa la weydiiyey Sharon Mac Gregor waxayna ku jawaabtey:
-waa run taasi ,ganacsiga ayaa ku khasbaya dadka alaabtaan soo daabulaya in ay keenaan alaabo raqiis ah, waxaana la rabaa alaabooyin macaash badani ku jiro.